N'ogbe ofe Akwụkwọ Bowl Manufacturer and Supplier |Futur
Ụdị nnukwu efere eco Wider anyị dị mma maka ndị na-ere nri dịka ha dabara maka nri ọkụ na oyi.Mpempe akwụkwọ eke e ji emepụta ite ndị a na-eme ka ọ dị mma ma bụrụ nke ọgbara ọhụrụ.Ọkwa ndị a nwere ike ịgbakọ, megharịa ya na ihe na-emebi emebi, na-eme ka ha dị mma maka ụdị mara gburugburu ebe obibi na-achọ iweda akara ukwu carbon ha.A na-ere ihe mkpuchi iche iche.Ọkwa ndị a sara mbara karịa Ecobowls anyị na-eme ka ha zuo oke maka efere nwere ntakịrị ihe ngosi!
Ngwaahịa akwụkwọ anyị nwere ike ime ka ejiri Ingeo™ PLA na-adigide, mkpuchi ihe na-emebi emebi sitere na ihe na-emekarị na osisi.Ọbụghị naanị na Ingeo ™ PLA nwere ike ịgbakọ nke ọma, ọ nwere akara ukwu carbon dị ala karịa ihe ọzọ dabere na rọba.
Ofe mpempe akwụkwọ
N'ikwekọ na ofe na-agbasawanye iji gaa ahịa, anyị nwere ọtụtụ ngwọta nkwakọ ngwaahịa.
Site na ngwaahịa ndị kwesịrị ekwesị maka friza, microwaves na oven, na ndị kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọkụ na-ekpo ọkụ, ma ọ bụ griiz na-eguzogide ọgwụ maka ihe oriri, ememe na nri-togo, anyị nwere ngwọta maka ihe ị chọrọ.Lelee njirimara nke ngwaahịa ọ bụla ma ọ bụ gwa otu n'ime ndị ọkachamara nkwakọ ngwaahịa anyị maka ịdị mma.
Ngwa akwụkwọ anyị nwere ike ime ka ejiri Ingeo PLA na-adigide, mkpuchi ihe na-emebi emebi sitere na ihe na-emekarị na osisi.Ọbụghị naanị na Ingeo PLA nwere ike ịgbakọ nke ọma, ọ nwere akara ukwu carbon dị ala karịa ihe ndị ọzọ dabere na rọba.
Mpempe akwụkwọ 90mm
SC6 6oz (90mm) Akwụkwọ efere 90*73*50mm 1000 (20*50pcs)
SC8 8oz (90mm) Akwụkwọ efere 90*74*63mm 1000 (20*50pcs)
SC12T 12oz (90mm) nnukwu efere akwụkwọ 90*72*85mm 1000 (20*50pcs)
Mpekere akwụkwọ 97mm
SC8U 8oz (97mm) Akwụkwọ efere 97*73*70mm 1000 (20*50pcs)
SC12S 12oz (97mm) squat akwụkwọ efere 97*78*80mm 1000 (20*50pcs)
SC16T 16oz (97mm) nnukwu efere akwụkwọ 97*75*102mm 1000 (20*50pcs)
Mpekere akwụkwọ 115mm
SC8S 8oz (115mm) squat akwụkwọ efere 115*92*47mm 500pcs
SC10 10oz (115mm) Akwụkwọ efere 115*91*52mm 500pcs
SC12 12oz (115mm) Akwụkwọ efere 115*92*63mm 500pcs
SC16 16oz (115mm) Akwụkwọ efere 115*93*82mm 500pcs
SC24 24oz (115mm) Akwụkwọ efere 115*87*113mm 500pcs
SC32 32oz (115mm) Akwụkwọ efere 115*90*135mm 500pcs
Emere ya na bọọdụ ọrụ dị arọ, siri ike yana ịrụ ọrụ ka mma.
Nha niile, dabara na nhọrọ mkpuchi ọtụtụ maka mkpa niile.
Mpempe akwụkwọ emere site na oke ọhịa a na-achịkwa nke ọma ma ọ bụ achara na-enweghị osisi.
Ọkwa nri kwadoro.
.Ejiri ink dabere na mmiri bipụta ya.
· Ngwakọta dị iche iche maka oge niile site na nri ụtụtụ na nri ehihie ruo nri mgbede na nnyefe.
· Ihe dị iche iche na ihe mgbochi iji gboo mkpa gị niile.
Ụdị nha na ụdị dị iche iche iji bulie visibiliti ọdịnaya ebe achọrọ ma nye mkpuchi echekwara maka nri na njem na mbufe.
Oke nhọrọ mkpofu site na imegharị ihe ruo na composability.
.Nhọrọ imewe ahaziri iji bulie mmetụta ika.
· Mpempe akwụkwọ kraft.
· Mpempe akwụkwọ ọcha
· Mpempe akwụkwọ bamboo
PE liner-nwere ike imegharị ya
Nke gara aga: Akpa akwụkwọ Kraft
Osote: Mkpuchi akwụkwọ